Gịnị bụ SEO? Anyị na-enye Free SEO Analysis 🎁 - Ne gerekir?
Kedu ihe SEO na-eme? Gini mere anyi ji agha SEO?
Gịnị bụ SEO? SEO pụtara ihe niile nye onye ọ bụla nwere weebụsaịtị! SEO ga - agwa gị na m nọ ebe a na ụzọ ọ bụla ị na - ewere. 🙂 N'isiokwu a, mgbagha dị mfe nke SEO ga-ekesa n'uche gị ugbu a. N'ihi na anyị kọwara ya n'ụzọ dị mfe ma na-atọ ụtọ.
Kedu ihe anyị nyere gị?
➜ Ọdịnaya anyị nwere nkọwa zuru ezu ma dịkwa mfe.
➜ Anyị jụrụ Ayhan KARAMAN banyere iju ma na-ajụ ajụjụ banyere SEO.
Anyị na Koray Tu Koberk GÜBÜR kwurịtara banyere Semantic SEO wee jụọ ọtụtụ ajụjụ dị egwu.
Kasị mma, anyị nwere onyinye! Anyị ga-emepụta nyocha SEO n'efu maka saịtị gị!
Ihe anyị ga-agwa na-emetụtakwa injin nchọ ndị ọzọ. Ọ bụ Google na-eche banyere azụmahịa a.
Google bu igwe nyocha. Ọrụ ọ na-enye bụ ịnye ọdịnaya kachasị dị mma ma kachasị dị elu maka isiokwu achọrọ. Ọ bụrụ na enweghị ike ịme ogo a n'ụzọ iji mejuo onye ọbịa, ndị mmadụ agaghị ahọrọ injin nchọta a. Ya mere, Google na-etinye ndị na-arụ ọrụ a n'ụzọ ziri ezi n'elu ma na-ewepụ ndị na-adịghị arụ ọrụ ahụ.
Kedu otu Google si ahọrọ nsonaazụ kwesịrị mma yana nke ọma? N'ezie, dị ka ọrụ SEO mere. SEO na-anọchi njikarịcha njin ọchụchọ. Google choro ka ichota saiti gi n’inyocha igwe. Ya mere, ọ chọrọ ka ị mee ka saịtị gị bụrụ nke kachasị mma ma dabara adaba maka njin ọchụchọ na ndị ọbịa. Ọ na-enyocha ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla na SEO ọmụmụ ọ na-ahụ ma na-edozi nsonaazụ ya.
A kọwara SEO dị ka usoro mmepe nke na-eme ka mmepe, ogo na okporo ụzọ nke saịtị gị dịkwuo elu. Nke a bụ nsonaazụ na-esi na ya pụta. Ka anyị mee ka ị mata ya nke ọma.
SEO bụ asụsụ ị na - ejikarị akọwa Google na weebụsaịtị gị. Ghaghị ịmụta ime ka ị mata onye ọ bụ.
Na ọrụ SEO niile anyị na-arụ, anyị ga-ekwu Google ndị a;
“Anyị na-na akara na-arụpụta n'ihi na nke a isiokwu!”
"Anyị na-enye onye ọbịa ahụmịhe mara mma n'okwu a!"
"Google! Anyị mere ihe ha chọrọ ma nwee ike ịmasị ndị ọbịa ha. Bịanụ kwụọ anyị ụgwọ! ”
Enwere ọtụtụ ihe Google chọrọ ka anyị mee nke ọma. Ọdịnaya ọdịnaya, ịdị mma iji chọọ ebumnuche na ọsọ bụ isi. Ọ bụ onye nkụzi siri ike. Ọ na-amanye gị ịgafe klas SEO Ya mere, ọ na - azụ gị usoro ọ bụla maka ndị ọbịa ka ha nwee ahụmịhe dị mma na saịtị gị. Ọ bụrụ na ịmụghị nke ọma na klas gị, ị ga-ada.
Ga-eme ike gị niile iji mee ndị ọbịa gị obi ụtọ. Nke a bụ ihe anyị.
Kedu usoro SEO? Kedu ihe SEO nwere?
Anyị ga-achọ ịkọ ọtụtụ maka ndị na - ajụ ihe na - arụ ọrụ SEO gụnyere. Anyị na-akwadebe isiokwu anyị banyere otu esi eme ya. Ọ bụrụ na ị na-achọ imeghe saịtị gị ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ imeziwanye SEO nke saịtị gị dị, isiokwu a ga-abara gị uru.
Anyị kwurịtara banyere usoro kachasị mkpa na ama ama iji ghọta SEO nke ọma. N'ezie enwere usoro nkọwa ndị ọzọ.
Mepụta saịtị ID
Mepụta saịtị saịtị maka usoro SEO
Nzọụkwụ a dị ka ndetu nke ị kwesịrị ile anya. Mgbe ụfọdụ anyị nwere ike ịgabiga ebumnuche saịtị anyị. Nke a agaghị amasị Google ma. Ya mere, ikpebi ihe anyị ga - eme na mmalite ga - enyere anyị aka ịga n'ihu n'ụzọ ụfọdụ.
➜ Aha Akara
➜ Ebube Brand
Iji chọpụta ihe ọ na-ewe Ne Gerekirga lee!
➜ Ebumnuche ika
N’isiokwu niile ne gerekiriji ghọọ nnukwu ihe ọmụma dị egwu site n'inye ihe ọmụma dị mkpa na ngwaọrụ maka otu esi aza ajụjụ.
➜ Ọhụụ ọhụụ
★ bebụ usoro mgbasa ozi kachasị atụkwasị obi na nke bara uru n'ụwa.
★ Inye ndị ọbịa ahụmịhe ga-eme ka ha nwee mmetụta pụrụ iche na ọdịnaya ọ bụla.
★ Iji hụ na ndị ọbịa nwetara ozi achọrọ ha ọsọ ọsọ, na ka ọ ghara inye ha nsogbu mgbe ha ruru ozi ha chọrọ.
★ Iji hụ na ndị ọbịa ahụ ritere uru site na ozi ahụ site na inwe ahụ iru ala na nchekwa.
N'agbanyeghị otu anyị si nwayọ nwayọ, anyị agaghị ada mbà. Ihe dị anyị mkpa bụ na nke ọ bụla n’ime ọdịnaya anyị kwesịrị igbo mkpa gị.
Anyị na-emegide Mmetọ Ozi. Ọ bụ ya mere anyị ji akwado ndị anyị na-ede akụkọ anyị ka anyị nwere ike. Anyị na-ewetara ndị ọkachamara anyị nsụgharị ikpeazụ nke isiokwu anyị iji chọpụta izi ezi nke isiokwu anyị.
Anyị na-enye ụzọ iji merie ihe mgbochi n’ihu ndị mmadụ iji ruo ndị mmadụ n’agbanyeghi asụsụ, okpukperechi, agbụrụ, nkwarụ ma ọ bụ ọrịa.
➜ Brand agba:
Gbara ọchịchịrị, Blue: pụrụ ịdabere
Oroma: Ike na ezi obi
Oke Osimiri Green: Ihe ziri ezi
➜ Ole ndị bụ ndị asọmpi gị?
➜ Kedu atụmatụ na ọrụ enyere na saịtị nke ndị asọmpi gị mana ọnweghị na saịtị gị?
★ Gosi isi mmalite maka edemede. (Anyị na-ewu.)
★ Ọrụ ọhụụ pụrụ iche maka ọdịnaya ọ bụla. (Anyị nọ na atụmatụ ahụ.)
➜ Kedu ihe ị ga - eme dị iche na njirimara na ọrụ ndị asọmpi gị na-enye na saịtị ha?
★ Anyị na-agba ndị ọkachamara ajụjụ ọnụ na aha ndị ama ama.
★ Anyị nwere ike irukwu mba asụsụ na mba.
★ questionsjụ ajụjụ bụ n'efu, enwere ike ikwu okwu ma enwere ozi n'etiti ndị otu / ndị ọkachamara.
Iwuli njirimara ụzọ
Nzọụkwụ iji mepụta ụzọ SEO
Echere m na ọ dị anyị mkpa ịmepụta njirimara ebe a, kwa, tupu anyị enwee ike ịmepụta map okporo ụzọ zuru ezu. Nke a ga - enyere anyị aka ịgafe otu ụzọ mgbe ị na - eke ma na-edezi ụzọ map gị.
➜ Kedu ndị na-ege gị ntị?
Onye ọ bụla chọrọ ihe ọmụma. (I nwere ike ịza nke a dịka ndị na-eto eto, ụmụ nwanyị, ndị gụsịrị akwụkwọ na mahadum.)
➜ Ebee ka ndị na-ege gị ntị nọ?
Worldwa dum (can nwere ike ịza nke a dị ka Istanbul, Turkey niile, Bursa.
➜ Kedụ ka ị ga - achọ ka ndị ọbịa gị nwee obi ụtọ na saịtị gị?
Na-eche na ha nwere ike ịnweta ozi ha chọrọ n'ụzọ dị mfe, echegbula onwe gị maka izi ezi nke ozi, nwee mmetụta na-enwe mmasi
➜ Ego ole na ozi ị chọrọ ibipụta na saịtị gị?
Ọ fọrọ nke nta ka ọ ruo mgbe ebighị ebi 🙂 (can nwere ike ịnye azịza ebe a dị ka afọ ojuju dị ka ọ dị mkpa.)
➜ Ga-eso ndị ọbịa gị na ndị ahịa gị na-emekọrịta ihe na saịtị gị?
➜ Ndi na-elekọta mmadụ na mgbasa ozi dị mkpa na saịtị gị ma ọ bụ azụmahịa gị?
➜ You chọrọ ịmụba amaokwu gị na saịtị gị?
➜ You ga-anakọta ozi kọntaktị ndị ọbịa?
➜ You ga-ere site na saịtị gị?
➜ Ọ bụrụ na ị na-aga ire, usoro ịkwụ ụgwọ ga-ewere ọnọdụ na saịtị gị?
➜ You nwere ụbọchị ewepụtara iji bipụta saịtị gị?
Enwere m ya, ezitere m ya.
Ikwesiri idowe aha abụọ a n'ihu gị mgbe ị na-emepụta map. Ga-ahụ ihe mgbaru ọsọ gị, onye ị bụ, ihe ị ga-arụ ọrụ na ya.
Ihe a ga - ehiwe mgbe ebido ọrụ SEO
Google Search njikwa
Kwesịrị ịkọwapụta ndekọ saịtị gị ebe a. N'ebe a, ị ga-enwe ike idobe saịtị saịtị gị, hụ njehie, ibe na akụkụ na ndeksi, ma nyochaa arụmọrụ saịtị gị. Akụkụ ndị ọzọ dịkwa.
Ikwesịrị ịkọwapụta ndekọ saịtị gị ebe a. Lee ị nwere ike igosi nyocha ndị ọbịa. Nwere ike soro ndị na-ege gị ntị, omume, mgbanwe, ihe mgbaru ọsọ. Akụkụ ndị ọzọ dịkwa.
Mgbe ịtọlite ​​ihe ngosi Google Analytics, ngwá ọrụ a ga-enye gị ozi gbasara arụmọrụ. Ọmụmaatụ; “Gịnị bụ SEO? - Ne GerekirOzi gị ”enwetabeghị / enwetabeghị mgbanwe karịa izu gara aga. Ya mere, ị ga-enwe ike isetịpụ ihe mgbaru ọsọ dịka ọnọdụ si dị ma degharịa usoro ndị dị n'ihu gị.
Yandex Metrica na Bing WebMaster Ngwaọrụ
Metrica, mmemme nyocha Yandex, nwere interface dị iche na tụnyere Google Analytics. Nke a na-enye akụkọ nyocha dịka nchịkọta, akụkọ, nleta, ntụgharị, mgbanwe maka nleta emere site na nyocha Yandex.
SEO ngwa mgbakwunye / modul
Kwesịrị ịgbakwunye SEO ngwa mgbakwunye gị na saịtị ahụ na plugins plugins dị ka All Na SEO, Rank Math, Yoast. Ihe mgbakwunye ị họrọ ga-enye gị ohere ịhazi permalinks gị, chọpụta peeji nke ọ bụla, mepụta mapụ saịtị, ma duzie gị ịdọ aka na ntị yana ịtọ ọdịnaya. Enwere ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ akwụ ụgwọ, n'efu.
Nke a ga - enyere gị aka ileta ọrụ ndị ọbịa na weebụsaịtị gị. Yabụ, ị nwere ike ịlele ịdị irè nke mgbasa ozi Facebook, kọwaa ndị na-ege ntị lekwasịrị anya, ma nyocha. Akụkụ ndị ọzọ dịkwa.
Google ADS na nchịkọta
Nke a dị ka Facebook Pixel na-enye nchịkọta na mgbasa ozi Facebook. Ọ bụrụ na ịkọwapụta Google ADS na Google Analytics ọnụ, ị ga-enwe ike nyochaa Mgbasa ozi Google gị. Nwere ike ịlele irè nke mgbasa ozi, ị nwere ike ịkọwa ndị na-ege ntị omenala. Akụkụ ndị ọzọ dịkwa.
Maka ahụmịhe onye ọrụ
Kwalite ahụmịhe onye ọbịa / onye ọrụ
Ndakọrịta nke ekwentị
You maara na ugbu a, ndị ọbịa na-esite na ekwentị. Saịtị gị agharịrị dakọtara na ekwentị. Can nwere ike were nke a n'ihu. Enwere ike ịmepụta isiokwu gị ka onye ọbịa wee nwee ike iji mkpịsị aka ha mee ihe nke ọma. Ọ ga-abụkwa ihe ezi uche dị na ya ịhọrọ isiokwu kwesịrị ekwesị.
Echefula oge ahụ mgbe ị gosiri mmadụ saịtị gị, mgbe ihere na-eme gị site na ntụgharị ihu nwayọ. Know maara na onye ọbịa ahụ agaghị echere maka sekọnd iji kwado peeji. Maka na e nwere ọtụtụ ebe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ọ nweghị ike ịchọta ya ebe a, ọ ga-ahụ ihe ọ chọrọ n'akụkụ ọzọ. Ọ gaghị enwe ndidi n’ihi na ọ ma nke a.
Mmehie ndị a na-ewetara gị nnukwu nsogbu. Onye nleta ahụ anaghị amasị peeji 404, yabụ Google anaghị amasị ya. Ga-agbaso ha ma weghachite na ibe gị dị mkpa.
Nyocha ndị ọbịa, nyocha vidiyo nke ndị ọbịa na maapụ ọkụ
Site n’inyocha mmegharị ndị a, ị ga - achọpụta ihe nsogbu ahụ bụ yana usoro gara nke ọma. E nwekwara usoro ọzọ nke mmadụ niile na-amaghị. Ndekọ vidiyo nke mmegharị ọ bụla nke ndị ọbịa. Nke a bụ n'ezie usoro bara oke oke uru. Nwere ike ịhụ ike gị, igodo na pịa ebe na eserese ọkụ.
Akwụkwọ a ga-eme ka ndị ọbịa gị nwee nchebe. N'ihi na ọ na-achọpụta izi ezi nke adreesị saịtị ahụ. Ọ na-enye nchebe nnyefe nke onwe ozi dị ka okwuntughe. Saịtị nwere asambodo a nwere mkpọchi ma ọ bụ ebe ndụ akwụkwọ ndụ na ekpe nke URL mmanya.
Optimrụ ọrụ njikarịcha
Njikwa arụmọrụ saịtị
Bochum ma ọ bụ ụlọ ọrụ ihe nkesa
Ndị a bụ ọrụ mbipụta websaịtị nke na-enye ndị ọbịa ohere ibe niile na saịtị gị. Ga-ahọrọ ọrụ nnabata ma ọ bụ ọrụ nkesa dị nso na mpaghara ọrụ gị. Ọ dị mkpa ịhọrọ nchịkọta na arụmọrụ dị mma na njirimara mgbe ị na-enweta ọrụ.
Should kwesịrị ị heeda ntị n'ịdọ aka na ntị banyere ibe gị na Search Console. Ikwesiri inyocha ihe ndozi na Google. Ọnọdụ dịka 404, 410, 5xx, 503 bụ nsogbu mkpuchi. Ga-ahụrịrị ịdọ aka na ntị ndị a n'akụkụ ngalaba na Google Search Console.
Caching ibe gi
Caching bụ nchekwa nwa oge nke data gị. Ọ ga-ebelata bandwit na ihe nkesa. Nke a ga - eme ka ọsọ ọsọ saịtị gị bawanye.
Ibelata JS / CSS faịlụ
JS na CSS faịlụ na-emetụta arụmọrụ saịtị. Nwere ike itinye akwụkwọ na ọkachamara nke ọrụ a iji belata ma ọ bụ gbuo oge. Ngwa mgbakwunye nwekwara ike ime ihe ndị a, mana n'ihi ya, njehie nwere ike ime na imewe.
Enwere plugins na saịtị ndị na-ebelata nha nke onyogho a na-enweghị imebi ogo onyonyo ahụ. Ime omume ndị a ka ga-emetụta ọsọ ọsọ saịtị gị. Ihe oyiyi WebP emebere ugbu a bụ usoro kachasị dị mma maka ọsọ. You nwere ike iji sgg usoro maka akara ngosi na onyonyo vectorial.
Na-ebugote onyonyo asynchronously
Ka onye ọbịa ahụ na-agbadata na ọdịnaya ahụ, itinye ihe oyiyi ahụ na-atụnye ụtụ nke ukwuu na mmepe ọsọ nke saịtị ahụ.
E nwere ọtụtụ ụzọ na usoro a, dịka ịgbanwe ụdị data, ịgbakwunye ndeksi, na-eme ka ogidi ID dị. Ọ ga-adị mma ịkpọtụrụ ọkachamara maka njikarịcha a.
Nka na ụzụ SEO
Nka na ụzụ SEO kachasị mma
A ga-edepụta peeji ndị nwere ọdịnaya dị mma. N'otu oge ahụ, ị ​​ga-egbochi ndepụta nke ibe ndị na-adịghị mkpa na ndị na-abụghị ọdịnaya (noindex).
Ihe edere ederede
Ọ bụ ndezi ederede iji gosipụta na negerekir.com na www.negerekir.com bụ otu na nke ziri ezi. Ọtụtụ peeji na ọdịnaya dịka nke a nwere ike ịchọ mkpado a.
Sitemap na iri ari mmefu ego
Google nwere ike ịchọta ma gosipụta ibe gị site na nkesa njikọ gị na saịtị gị, ọbụlagodi na enweghị saịtịmap gị. Nwere ike ịnwe peeji ndị ịchọrọ ederede na saịtịmap. Ya mere, saịtị saịtị dị mkpa maka bọọlụ ọchụchọ iji chọgharịa nke ọma. Yabụ, ị ga - enyekwa aka na ntinye ego.
Bots ga-ahụ maka peeji dị mma 500 kwesịrị ịdị na ndekọ aha kama inyocha peeji 300 na-aga n'ihu.
Nchịkọta nhọrọ SEO kachasị mma
Ọdịnaya gị kwesịkwara inwe atụmatụ. Ikwesiri iso ndi asọmpi gị ma mezue adịghị ike gị dabara nke ọma ma chee ihe ha na-enyeghi.
Keywords bụ okwu ndị ọbịa na-achọ na engines ọchụchọ. Iji nweta nsonaazụ kachasị mma maka okwu ndị a, ị kwesịrị ịme nyocha isiokwu.
Ihe omuma na ọdịnaya di nma
Ogo nke ọdịnaya enweghị ike tụọ n'ogologo na mkpụmkpụ. Mana ogologo ma n'otu oge ahụ ọdịnaya ọdịnaya bụ n'ezie eze.
Ebumnuche onye ọrụ
Kedu ihe ndị ọbịa chọrọ n'ezie n'okwu ndị ha na-achọ? Chọrọ inweta ozi? Ma ọ bụ zụta ngwaahịa? Ndị a bụ naanị 2 nke nchọta intents. Kwesịrị ịmepụta ọdịnaya gị n'ụzọ kwekọrọ na ya.
Ihe onyonyo na vidiyo
Inye ọdịnaya na onyonyo na vidiyo ga-agbatị oge onye ọbịa ga-etinye na ibe gị ma nye ezigbo ahụmịhe. Ga-enweta ezigbo nzaghachi ma ọ bụrụ na ị na-eweta vidiyo na ntụpọ.
Melite ọdịnaya gị mgbe niile. Ihe niile na-agbanwe. Nwere ike ịmepụta maa melite. Nwere ike ịlele ederede nke usoro ha gbanwere ọtụtụ ugboro n'ọnwa. Nwere ike ịlele isiokwu ndị atụmatụ ha anaghị agbanwe agbanwe kwa ọnwa ọ bụla 3.
Na SEO saịtị njikarịcha
On-Page SEO njikarịcha
Ọdịnaya maka onye ọrụ
Lumetụta engines ọchụchọ na-arụ ọrụ naanị obere oge. Nwere ike ị nweta ahụhụ ma emechaa. Obi ụtọ na onye ọbịa gị, ọ dị mfe.
Echere m na ịdọ aka ná ntị iji otu aha H1 na ibe nke ọdịnaya gị na-aghọ ihe gara aga. Google webmasters zara ya na vidiyo nke otutu mkpado H1 anaghị akpata nsogbu na sistemụ ha. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị usoro akọwapụtara maka nke a, iji otu H1 ga-aka mma.
iji nweta ya
Ọ nwere ike ịdị mkpa ka ị attentionaa ntị n'ọtụtụ okwu maka ndị nwere nkwarụ ma ọ bụ ndị ọrịa. Enwere ike ịchọta agba na isiokwu ịchọrọ ị attentiona ntị, dị ka ihe dị na visuals ị na-eji. Methodzọ kachasị ama ama n'okwu a bụ ịgbakwunye alt mkpado na onyonyo maka ndị nwere nsogbu anya.
H1, H2, H3, H4, H5, H6 mkpado nwere usoro sitere na isi onye isi rue obere isi. Iji ha eme ihe ziri ezi ọ bụghị naanị na-egbochi ndị ọbịa ka ha ghara imebi ọdịnaya ha na-agụ, kamakwa ọ nwere ndụmọdụ maka Google.
Na-etinye aha meta na nkọwa meta
Aha gị, ebe isiokwu gị kwesịrị ịdị, kwesịrị ịbụ ihe na-atọ ụtọ. Mgbe ụfọdụ o kwesịrị inwe ọnụọgụ ma oge ụfọdụ ya kwesiri iju gị anya… Cheta, ihe mbụ ndị ọbịa gị ga - ahụ ebe niile ga - abụ aha gị.
A ga-etinyekwa mkpụrụ okwu gị na nkọwapụta meta, ma kwesịkwara ibute clicks.
Esịtidem na mpụga njikọ
Can nwere ike iduzi ya na ọdịnaya dị mkpa. Nwekwara ike ijikọ saịtị ndị ọzọ. Ihe ọ bụla na-arụ ọrụ maka ha ga-amasị onye ọbịa na Google.
Ọnụnọ SEO njikarịcha
Ndachapụ ihu-SEO kachasị mma
Nke a bụ ebe ị kwesịrị ịkpachara anya. Biko enwela obi ụtọ ma zụta nchịkọta backlink.
Gwa onwe gi gbasara backlinks: Obere, ozo! Ọ dị mkpa na a kpọtụrụ gị aha na ebe ga-enye gị nzaghachi ma mepụta mmekọrịta. Ọ bụ ya mere echiche na ọtụtụ backlinks m nwere, nke ka mma, adịghị eweta ihe ọ bụla ma ọ bụghị ihe ọjọọ.
Ihe m na ekwu maka ya bu na ikwesiri inyocha ndi ndoro-ndoro-ndoro-ndoro-elu dika odi gi. Gbalị ịnọ ebe ha nọ ga-arụ ọrụ. Ọ dịkwa ezigbo mkpa ịchọta ebe ha na-anọghị mana nke ahụ nwere ike ịmepụta mmekọrịta. Lezie anya inweta njikọ nwere aha njirimara gị.
Inweta njikọ sitere na netwọkụ mmekọrịta gị dị mkpa maka ịmara mmata. Iji netwọkụ mmekọrịta gị na-arụ ọrụ ga-abawanye akara maka mmata a. Ọ dịkwa mkpa ka ị mepụta ọdịnaya metụtara mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Bụrụ onye ọbịa ọbịa
Nwere ike ịbụ onye edemede ọbịa ịkọ isiokwu ma ọ bụ saịtị gị na saịtị dị mkpa. Isiokwu ndị a kwesịkwara ịbụ nke mbụ, a ga-amụkwa ha.
Mpaghara SEO kachasị mma
Mgbanwe mpaghara SEO maka saịtị ahụ
Google My Business, Yandex Maps, Business Bing
Site na ịkọwapụta ebe ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ụlọ ahịa dị ebe a, ị ga - enwetakwu ngwa ngwa. Nwere ike ịkọ ọtụtụ atụmatụ gị ma gosi oge ị mepere.
Kpọsaanụ mpaghara na Google na-elekọta mmadụ media. Nwere ike ịkpọ aha gị na saịtị mpaghara.
Gịnị mere SEO ji dị mkpa?
SEO bu ihe di nkpa iji meputa uzo di nma ma di nma. Ọ chọrọ ndidi na mgbalị.
I nwere ọtụtụ ndị asọmpi. Kedu ka ha ga - esi chọta gị n’etiti nhọrọ ndị a niile? N'ezie, na a mma SEO ọrụ na ụdi search N'ihi rankings…
Ọ bụrụ n'ịrụghị ọrụ SEO, ọ ga-adịrị gị mfe ịpụta na ibe mbụ na nchọnchọ ọchụchọ dịka Google. Ingrụ ọrụ a nke ọma na-enye gị isi ihe dị mma gbasara usoro ịmara na ntụkwasị obi. Ihe ọ bụla ị na-eme ka oge na-aga, ị nwere ike ịnọ na peeji ndị mbụ.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị nwere ebe nrụọrụ weebụ ma mara otu esi eme SEO, ịhapụ nke a na otu nwere ike ịbụ atụmatụ dị mkpa. N'ihi na SEO bụ esemokwu chọrọ nlebara anya. Gaghị enwe ike ịnye ezigbo mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmekọrịta akụkụ ọrụ aka, dee edemede ma rụọ ọrụ na SEO. N'ezie, ọ dịghị ihe dịka ihe na-agaghị ekwe omume.
Enwere m ike ịmepụta SEO?
Offọdụ n'ime ya ee. Nke a bụ ọrụ nke ọrụ, ị gaghị ahụ ụzọ mkpirisi ebe a. Ya mere echela banyere ihe ndị ahụ ma ọlị ma gbalịa ime ihe ga-amasị onye ọbịa gị.
SEO ọ bụ ezigbo ọrụ?
Ee asaa. Ọ bụ n'ezie nnukwu ọrụ ebe ị nwere ike ịdị ike mgbe niile. N'ihi na SEO na-agbanwe ma na-agbanwe agbanwe. Onwere mmadu ole na ole no na Turkey nke SEO oru ha kachasi nma. Ya mere, ị nwere ike iso n'etiti mmadụ ole na ole site na imeziwanye onwe gị.
SEO ọkachamara ụgwọ ọnwa
Ọ dabere na mpaghara ị ga-ebuli elu na isiokwu ndị ị ga-arụ ọrụ na ha. Ọ dị iche ma ọ bụrụ na ị na-na nanị optimally internally, dị iche iche ma ọ bụrụ na ọ na-enye akụkọ, dị iche iche ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ijikwa niile ọrụ. Enwere ọnụọgụ ego nke 50-350 TL maka ọrụ dịka ịkọ akụkọ naanị. Ndị ndụmọdụ kwa ọnwa nwere ike ịnye ọnụahịa n'etiti 1.000 na 15.000. Ndị na-arụ ọrụ niile nwere ike ịnye ọnụahịa n'etiti 10.000-20.000.
Bụ SEO n'efu?
Ọbụlagodi na ị nwaa ime ya kpamkpam na aka gị, ọ na-esiri gị ike ime ya n'efu. Ọ bụrụ n'ịgbalị ime ya n'onwe gị ọbụlagodi n'okwu ụfọdụ nke ị bụghị ọkachamara, ị nwere ike ibute nsogbu a na - enweghị ike ịgbanwe agbanwe na saịtị gị.
SEO dị mfe mmụta?
Ebumnuche ya dị mfe mmụta mana o siri ike itinye ya 🙂
Kedu ka ị si chọta isiokwu anyị? Kekọrịta anyị ụfọdụ ozi gbasara SEO. Maka saịtị nke mmadụ 5 nyere ozi anyị hụrụ na-adọrọ mmasị nke ukwuu free SEO nyocha anyị ga-akwadebe! 😊
Ajụjụ Ọnụ Banyere SEO
Iwuli saịtị na Wix ⚠️ O Kwesịrị Gị? 💻
Edemede anyị nwere ozi niile achọrọ maka Wix. Isi;
Otu na nchịkọta
Ahụike247.jweb.vn | Mmmmmmmmmmmm
06/08/2021 at 07:01 - zaghachi
Ndewo, enwetara m ọkwa gbasara webụsaịtị gị site na Google wee chọpụta na ọ bụ ihe ọmụma n'ezie. Aga m a attentiona ntị n'ihe edere ebe a maka webụsaịtị nke m.
M ga -enwe ekele ma ọ bụrụ na ị gaa n'ihu na njiri mara nke a n'ọdịnihu.
Ọtụtụ mmadụ ga -erite uru na edemede gị.
09/08/2021 at 13:32 - zaghachi
Ekele adịghị agwụ agwụ! Anyị ga -aga n'ihu… 😊
Badiet.ir | Mmmmmmmmmm
05/08/2021 at 19:36 - zaghachi
Ọdịnaya dị mma bụ ihe nzuzo ịbụ ndị ọbịa lekwasịrị anya. Ebe nrụọrụ weebụ a na -enye nke ahụ.
09/08/2021 at 13:31 - zaghachi
Daalụ nke ukwuu! Mmmmmmmmmmmm
Alana Chauvel | Mmmmmmmmmmmm
05/08/2021 at 13:58 - zaghachi
Enweghị m ike ịhapụ saịtị gị n'ekwughị na ọ masịrị m ịgụ njirimara njirimara na ụzọ okporo ụzọ ị mepụtara dịka ọmụmaatụ na edemede gị. M ga -abịaghachi na saịtị gị oge niile iji nyochaa ihe ọhụrụ.
Anyị na -arụ ọrụ na ọtụtụ akụkọ na -atọ ụtọ. Inwe ike ime gị obi ụtọ bụ mmetụta kacha mma n'ụwa! Mmmmmmmmmmmm
Adept | Mmmmmmmmmmmm
05/08/2021 at 02:40 - zaghachi
Ọzọkwa, na -achọsi ike inweta ahụmịhe, ọsọ nke ibe weebụ a nwere nnukwu mmetụta. Ọ dị mma ịgụ echiche ndị enyi niile gbasara edemede a. N'ikpeazụ, ana m ekele gị nke ukwuu maka ajụjụ ọnụ gị!
09/08/2021 at 13:30 - zaghachi
Ọsọ ọsọ dị anyị mkpa n'ezie. Na mgbakwunye, anyị nwere ọmụmụ zuru ezu ka ị nwee ike nweta ozi ịchọrọ na obere oge karịa nke ọma. Ị ga -enwe mmetụta n'oge na -adịghị anya! Mmmmmmmmmmmm
03/08/2021 at 17:17 - zaghachi
Ebe ọ bụ na m nwere mmasị n'ịgụ akụkọ a, ekwesịrị imelite ya kwa ụbọchị. O nwere ezigbo data.
09/08/2021 at 13:29 - zaghachi
Daalụ nke ukwuu! 😊 A na -enyocha mmelite akụkọ anyị otu ugboro n'ọnwa. Banyere…
Cyrus Billiot | Mmmmmmmmmmmm
29/07/2021 at 08:28 - zaghachi
Ị nwere nnukwu blọọgụ mana achọrọ m ịma ma ọ bụrụ na ị maara nzukọ ọgbakọ ọ bụla na -ekpuchi otu isiokwu a tụlere ebe a.
Ọ ga -amasị m n'ezie ịbụ akụkụ nke obodo ebe m nwere ike nweta nzaghachi site n'aka ndị nwere ahụmịhe ndị ọzọ nwere otu mmasị.
Ọ bụrụ na ị nwere aro ọ bụla, biko mee ka m mara. Daalụ!
09/08/2021 at 13:41 - zaghachi
Ndewo ekele. Mmmmmmmmmm
N'ezie enwere. Mana ugbu a ọ na -esiri ike ịchọta ebe ị ga -enwe ahụ iru ala n'asụsụ nke gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ihe ịchọrọ ịtụle, aga m eduzi gị na njikọ dị n'okpuru.
Ne Gerekir Jụọ ndị ọkachamara ajụjụ
Shelley Kuykendall | Mmmmmmmmmmmm
26/07/2021 at 23:51 - zaghachi
Ndewonu mmadu nile, nke a bu nke mbu m huru web page a. Ọ dịka ọ bụ m chepụtara isiokwu ahụ. N'ezie oru oma. Nọgide na-ezipụ ụdị edemede ahụ.
27/07/2021 at 08:54 - zaghachi
Daalụ nke ukwuu! Ga-ejide n'aka na anyị ga-aga n'ihu!
24/07/2021 at 14:15 - zaghachi
Heya pụtara na weebụsaịtị! Ime blog dị ka nke a ọ na-ewe ọtụtụ ọrụ? Enweghị m ọkachamara mmemme kama m na-enwe olileanya ịmalite blọgụ nke m n'oge na-adịghị anya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị nwere aro ma ọ bụ ntụzi aka maka ndị na-ede blọgụ ọhụrụ, biko kesaa.
Aghọtara m na nke a bụ okwu ahụ, mana achọrọ m ịjụ. Cheers!
27/07/2021 at 09:36 - zaghachi
Ndewo Baik. 😊 Ihe isi ike nke ịmalite blọọgụ maka ndị mbido dabere na usoro njikwa ọdịnaya ị malitere. Nwere ike ịtọlite ​​ma dezie blọọgụ nke gị na Wix na nkeji. Can nwere ike ime nke ọma na njikarịcha SEO, belụsọ maka mmachi teknụzụ. Lee, m hapụrụ edemede anyị gbasara Wix.
Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe usoro ogologo ma na-eto eto, ị nwekwara ike ịrụ ọrụ na WordPress. N'ebe a, ị gaghị ezute njedebe ọ bụla na njikarịcha SEO. Ma ịmepụta blog ebe a nwere ike ịbụ ihe ịma aka karịa Wix. Agbanyeghị, chee echiche maka ihe ị chọrọ ma họrọ usoro njikwa ọdịnaya nke ga-adịrị gị mma.
Ndị na-ede blọgụ ọhụrụ kwesịrị ịtọ ụbọchị ịhapụ dị ka ọwa YouTube mgbe arụchara ọrụ teknụzụ. Kwesịrị ịgbaso ụbọchị ndị a ma ghara ịhapụ ụbọchị mbipụta dịka akwụkwọ akụkọ. Isiokwu ha kwesiri ibu asusu di nkiti ma dikwa nma. Beingbụ onye pụrụ iche dị mkpa maka Google, n'ezie, mana ọ bara uru ka mkpa. Ihe m na-ekwu ebe a bụ na ị nwere ike ịkpọpụta isi mmalite. Mgbalị gị inwe ahịrịokwu nke gị ga-emepụta igbu oge ebe a. Mgbe obere oge gachara, ị nwere ike mejupụta ọdịnaya gị site na ụzọ dị iche iche wee bido chee echiche banyere usoro ndị ọzọ saịtị gị chọrọ.
19/07/2021 at 14:00 - zaghachi
Obi dị m ezigbo ụtọ na achọtara m ihe m na-achọ.
Mechara ichu nta ụbọchị 4! Chukwu gozie gi nwoke. Ehihie ọma.
26/07/2021 at 09:17 - zaghachi
Obi dị anyị ụtọ na ị nwere mmasị na edemede anyị ma nwee ọ itụ na ya. Isiokwu anyị ga-abụ nke oge. Anyị na-achọ gị ụbọchị dị mma! 😊
Ogwe kacha mma na grịl na Hickory | 🇹🇭
23/06/2021 at 15:47 - zaghachi
Super, kedu blog bu nke a! Ebe nrụọrụ weebụ a na-enye anyị ozi bara uru, gaa n'ihu.
23/06/2021 at 15:50 - zaghachi
Okwu gi mere anyi obi uto. Daalụ nke ukwuu. Anyị ga-aga n'ihu otu a! 😊
Jonelle Mackinlay | Mmmmmmmmmmmm
21/06/2021 at 13:02 - zaghachi
Hmm, onye ọ bụla ọzọ nwere nsogbu na ihe oyiyi na-etinye blog a? Ana m agbalị ịchọpụta ma nsogbu ahụ ọ bụ m ka ọ bụ blọọgụ ahụ. Nzaghachi ọ bụla ga-enwe ekele dị ukwuu.
21/06/2021 at 14:25 - zaghachi
Ndewo ebe ahụ! Enwere m ike ịhụ onyonyo dị na ibe ị na-ebigharị. Echeghị m na nsogbu ọ bụla dị.
Ọ bụrụ na ị na-eji WordPress na foto gị na-aga nwayọọ nwayọọ, ị nwere ike idozi nsogbu a na ngwa dịka WebP Express na Nitropack.
Ọ bụrụ na enwere ihe ọ bụla ịchọrọ ịjụ, obi ga-adị m ụtọ inye aka ngwa ngwa. Ezi echiche…
Igwe ọkụ Laser | Mmmmmmmmmmmm
15/06/2021 at 18:01 - zaghachi
Ọ dị m n’obi ma ọ bụrụ na m kwuo edemede gị ole ma ole ma ọ bụrụhaala na m na-akwado weebụsaịtị gị? My blog bụ otu mmasị dị ka nke gị na ndị ọrụ m ga-erite uru site na ụfọdụ ozi ị nyere ebe a.
Biko mee ka m mara ma nke a baara gị uru. Daalụ nke ukwuu!
15/06/2021 at 20:20 - zaghachi
Anyị na-asọpụrụ. Zitere anyị ngalaba aha saịtị gị nke ị ga - ekekọrịta. Ka anyị kwuo banyere ya!